ရှန်ကျန်း Mingxue optoelectronics Co. , Ltd မှ - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
ul နောဧသည် Plus အားအလင်းတိုးတက်ကြီးပွား LED
Noah- S ကိုအလင်းတိုးတက်ကြီးပွား LED
wifi ထိန်းချုပ်ရေးအလင်းတိုးတက်ကြီးပွား LED
Gaea အလင်းတိုးတက်ကြီးပွား LED
Ceres COB အလင်းတိုးတက်ကြီးပွား LED
IP65 ပန်းကန်ပြားပျံအလင်းတိုးတက်ကြီးပွား LED
နယူးဇု COB ခရမ်းလွန်အလင်းတိုးတက်ကြီးပွား LED
300W အလင်းတိုးတက်ကြီးပွား LED
135W ပန်းကန်ပြားပျံအလင်းကြီးထွား LED
IP65 အလင်းဘားတိုးတက်ကြီးပွား LED
အလင်း Panel ကိုတိုးတက်ကြီးပွား LED
ul အလင်းမြှောင်တိုးတက်ကြီးပွား LED
Shenzhen XUEMING Optoelectronics Co.,Ltd (also known as XUEMING ,stock code :838130) was founded in 2005 , XUEMING isamanufacturer engaged in research , development, production and sales of LED grow light , led strip , led bar and LED display module with more than 13,000 square meters production plants.
XUEMING has an experience for more than 13 years in led , skilled workers, advanced equipments and strick control and producing system make us one of the leading company in led business.
XUEMING has successively obtained state-level high-tech enterprises, top 100 LED companies, and other honorary titles, and certified by SGS/ISO9001:2000/TS16949 CE RoHS、FCC、ERP ,UL LM-80 as well as UL 8800 for led grow lights .
XUEMING’s led grow lights are widely used in plant factory , greenhouse ,grow tents etc ;and XUEMING’s LED strips are widely used in supermarket chains, hotel projects, shelf booths, smart homes and etc ; XUEMING’s display module is widely used in major media, outdoor indoor advertising applications and other fields.
တက်ကြွစွာနည်းပညာမြင့်လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏အလွန်ကြီးစွာသောအမျိုးသားရေးမဟာဗျူဟာတုံ့ပြန်ရန်နှင့်ထို့ထက် ပို. သုတေသနရန်ပုံငွေရရှိရန်အလို့ငှာ။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အိမ်မှာနှင့်ပြည်ပမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များကိုပိုမိုယှဉ်ပြိုင်စေ, ပိုမိုထိရောက်သည့် LED ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးနိုင်, အဆိုပါကုမ္ပဏီအားအောင်မြင်စွာ 2015 ခုနှစ်ပေကျင်း neeq အပေါ်စာရင်းဝင်ခဲ့သည်။
XUEMING hope to set upalong-term partnership with you through our high quality products and our Sincere Service !